जेठ २३, काठमाडौं । मल्टीपर्पस फिनान्स कम्पनी लिमिटेडले आगामी असार ६ गते आव्हान गरेको २३ औं वार्षिक साधारण सभाका लागि सोमवार एक दिन बुक क्लोज गर्ने भएको छ ।
बुक क्लोजको आधारमा आइतवारसम्म शेयर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीले सभा केन्द्रीय कार्यालय राजविराज, सप्तरीमा बिहान ११ बजे बोलाएको हो । सभाले कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।
साथै सभाले आव २०७६/ ७७ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने । साथै आव २०७७/ ७८ को लागि लेखापरिक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ । कम्पनीले सभाका लागि लाभांश भने प्रस्ताव गरेको छैन ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ४० करोड रहेको छ भने जगेडा कोष रकम रू. ४ करोड ६७ लाख ३८ हजार रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले रू.३ अर्ब ५ करोड ३८ लाख ७८ हजार खुद नाफा गरेको छ । यस अवधिसम्म कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ४ दशमलव ८ रहेको छ ।